Nanofana synoda roa (SPAFI /SPATSIM) ny CNaPS - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manana zo hisitraka ny fiahiana sosialy tahaka ny mpiasa rehetra ny mpiasan’ny Fiangonana iray. Izay no torolalana tsy maintsy tanterahina ho an’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) araky ny fanentanana nataon’i Pasitera Dr David Rakotonirina, Filohan’i FLM, raha niaraka nizara ny tombontsoa ho an’ny mpampiasa sy ny mpiasa amin’ny fidirana mpikambana ao amin’ny CNaPS ny tenany. Izany dia nandritry ny fanentanana sy fifanankalozan-kevitra tamin’ireo pasitera, vehivavy teolojianina, katekista, evengelistra, mpampianatra sy mpitsabo ary olon’ny komitim-piangonana avy amin’ny synoda roa dia ny SPAFI (Synodam-paritany Fisakana) tao Fandriana ny 10 sy 11 aprily 2018 ary tao Soavina ho an’ny SPAtsim (Synodam-paritany atsimon’i Mania) ny 12 sy 13 aprily 2018.
Nitondra fiofanana ny avy amin’ny Foibe CNaPS Antananarivo nampian’ireo solontenan’ny tendro sy ny masoivoho ka ireo mpiasam-piangonana miisa 200 no niofana tao amin’ny SFM Fandriana ho an’ny SPAFI ary 120 no nandray anjara tao amin’ny fiangonana FLM Soavina ho an’ny SPAtsim. Tonga mavitrika nanentana ihany koa ny Filohan’ny FLM. Synoda fahafolo sy faha iraika ambin’ny folo nahazo fiofanana ireo. Tsiahivina fa synoda 24 no mandrafitra ny FLM.
“Misaotra ny CNaPS amin’ny fiaraha-miasa, izay hitohy mandavan-taona ary heverina ho vita amin’ny faran’ny taona 2018… Efa lasa lavitra dia lavitra ny zava-bita ary antenaina fa ho lasa lavitra kokoa rehefa vita ny tetikasa efa natomboka satria marobe ireo olana efa voavaha ary mbola maro koa ireo mbola hovahana”, hoy Dr David Rakotonirina, filohan’i FLM. Nanamafy izany ny solontenan’ny Foibe CNaPS tamin’ny alalan’ny Tale informatika, Andriantsalama Manan’Iala, izay nanambara fa “Fanohizana ny fiaraha-miasa CNaPS/FLM vita sonia ny volana oktobra 2017 ny fiofanana natao. Samy manao asa masina, manao izay hitsinjovana ny olona sy fifanakolazan-kevitra sy traikefa no natao nandritry ny fiofanana. Mazava arak’izany koa fa voafaritry ny didy aman-dàlana ny tolotra omen’ny CNaPS”.
Na tao Fandriana na tany Soavina dia samy nanambara ny mpanatrika ny fiofanana fa nilaina sy nahasoa ireo toro-làlana sy fampitana traikefa nomen’ny CNaPS. “Tena ilaina ny CNaPS satria hitsinjovana ny ho avy sy ny tombontsoa ho an’ny taranaka ary ny fiofanana no nahalalana zavatra mbola tsy fantatra mikasika ny fandrotsahana ny latsa-kemboka ary na dia mbola tsy mpikambana feno aza dia marisika hiditra ho mpikambana amin’izay” hoy Ramatoa Razaramasy Herisoa, katekista ao amin’ny Fitandremana Tsinjorano, fileovana Soavina. Nanamafy izany ny Pasitera Randriamampianina Solofoniaina, mpitondra fileovana ao Sahamadio (SPAFI) raha nilaza fa “19 taona izao no naha mpikambana ahy tao amin’ny CNaPS ary efa nisitrahako ny zo amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. Amiko manokana tena ilaiko ny fahalalana amin’ny ankapobeny ny fiofanana omen’ny CNaPS ary fiofanana faharoa natrehiko izao… faniriana aza dia tokony hisy isan-taona ahalalan’ny tsirairay sy ny tsy mbola mahalala na mpiasa na mpampiasa ny fiahiana ara-tsosialy izay iriana ny fanatsarana azy hatrany”.